Pizza Hut wuxuu dib ugu laaban yahay xididadiisa isagoo wata astaantii tobanaan sano soo jirtay | Abuurista khadka tooska ah
Pizza Hut ma taaban astaanteeda ilaa 2014 Marka hadda waxaad go'aansatay inaad dib ugu laabato xididdadaada oo leh astaanta saqafka casaanka ah ee astaanta u ah. Astaan ​​la naqshadeeyay 60-meeyadii oo dib ula soo noqota iyadoo awoodeedii hore la moodo inaan waqti la dhaafin.
In laga fikiro in astaantan ay jiilkee la socdaan awood u yeesheen inay ku istaagaan mid ka mid ah waxyaabaha loo yaqaan 'pizzerias' Waa qodob aad u xiiso badan oo ku saabsan ujeedooyinka cusub ee Pizza Hut. Maaha markii ugu horreysay ee aan aragno summad weyn oo dib ugu laabanaysa astaan ​​sannado ka hor.
Haddaan ka hadalno astaantaan wuxuu ahaa quintessence of Pizza Hut dhowr iyo toban sano, waan fahmi karnaa muhiimadda ay u leedahay astaanta. Waa waddo aad ugu laabato xididdadaada si aad uga soo kabato waxa kugu caan baxay.
In kasta oo tan ku jirta biisaska, waxa muhiimka ah, sida xayeysiin loo yiri, wuxuu ku jiraa cajiinka. Astaantan waxaa la adeegsaday intii u dhaxeysay 1967 iyo 1999 waxayna soo bandhigeysaa dareenkaas oo ah inaanu gabowsaneyn waqtiga. Waxay ku jirtaa fiidiyoow halkaas oo aan ka arki karno nooca la soo nooleeyay ee astaantan astaanta Pizza Hut.
Sidoo kale, habka, waxaan baran karnaa waxa ka shaqeeya astaanta markaan doonaynno inaan wax badan sudhanno: qaabab fudud, midabbo dhalaalaya iyo fariin aad u cad oo awood u leh inay gaarto dhammaan noocyada macaamiisha ee laga yaabo inay soo maraan maqaayadaha caanka ah
Pizza Hut wuxuu siiyay a isbedel weyn oo qurux badan 2014 markii uu keenay astaantaas cusub oo aad uga duwan tii hore. Sidii ay u ahayd qaab pizza, adigoon ilaawin casaanka, waxay umuuqataa in Pizza Hut ay rabto inay ku laabato xukunkeeda si ay u sameyso astaan ​​oo ay sifiican ugu soo ceshato aqoonsigeeda.
Waxay sidoo kale muujineysaa taas mararka qaarkood ku qasab astaan ​​cusub waqtiyada cusub waxay ku guuleysan kartaa saameynta ka soo horjeedda. Sidaa awgeed tan waa la fahmi karaa dib ugu noqoshada sanado ka hor sumad la xiriirta biisaska.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Pizza Hut wuxuu dib u soo celiyaa astaamihiisii ​​saqafka casaa ee caanka ahaa